एमाले सोलुखुम्बुवाट को-को भए सिफारिस ? – Himal FM 90.2 MHz
एमाले सोलुखुम्बुवाट को-को भए सिफारिस ?
राष्ट्रिय खबर adminhimal October 6, 2017
हिमाल एफ एम, २० असोज । प्रदेश र प्रतिनिधी सभा आसन्न निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले उम्मेदवार छनोट गरेको छ । एमाले सोलुखुम्बुको गत बुधबार बसेको बैठकले प्रतिनिधी सभाको प्रत्यक्षतर्फ जिल्ला अध्यक्ष मानवीर राईलाई उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिनिधी सभाको लागि समानुपातिकतर्फ भने पार्टी सोनाम ग्याल्जेन शेर्पालाई सिफारिस गरिएको छ ।
प्रदेश सभाका लागि उसले २ नम्बर क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तर्फ नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सर्वसम्मत् उम्मेदवार चयन गरेको छ भने समानुपातिकतर्फ आङ ङिमा लामालाई सिफारिस गरिएको छ । पार्टीमा लामो समय नेतृत्वमा रहेका दुवै नेतालाई २ नम्बर क्षेत्रका नेता कार्यकर्ताले सर्वसम्मत् रुपमा सिफारिस गरेका हुन् ।
राजभण्डारी २०६४ र लामा २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए । २ नम्बर क्षेत्रवाट अन्य नेताहरुले समेत उम्मेदवार बन्ने दाबेदारी प्रस्तुत गरेपनि छलफलवाट सर्वसम्मत् रुपमा सिफारिस गरिएको एमालेले जनायो ।
१ नम्बर क्षेत्रमा भने आकांक्षी धेरै र सहमति नजुटेका कारण जिल्ला कमिटी समक्ष आकांक्षीको नाम सिफारिस गरिएको छ । १ नम्बर क्षेत्रमा नेताहरु डिबी किराती, उत्तमकुमार बस्नेत, भिमराज राई, जुद्ध बहादुर कार्की, लोचनकुमार शर्मा, बिष्णु बास्तोला, सोभित बस्नेत र गोबिन्द बस्नेतले उम्मेदवार बन्ने इच्छा ब्यक्त गरेका छन् ।
१ नम्बर क्षेत्रको समानुपातिक महिलातर्फ सहमति नजुटेपछि मोहनकुमारी बस्नेत र सुर्यकुमारी सुनुवार दुवैको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
ओखलढुंगा : रोजगारी गुमाउँदा भोकभोकै बस्न बाध्य
दिप्लीघाट–खोर्दा बेलिब्रिजको काम अन्तिम चरणमा (फोटो फिचर र भिडियो)